Nyaya Yeupenyu: Kuita Zvaunoudzwa naJehovha Kunounza Makomborero | Olive Matthews
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Yakataurwa naOlive Matthews
“Tichaita kudaro!” Ini nemurume wangu, pamwe chete nehanzvadzi yangu nemudzimai wayo takataura mashoko iwayo tichibvuma kuita basa ratakakumbirwa kuita. Nei takabvuma kuita basa racho, uye Jehovha akatikomborera sei? Kutanga, regai ndimbokuudzai nezvangu.
NDAKABEREKWA muna 1923 muHemsworth, taundi riri muYorkshire, England. Ndaiva nehanzvadzi imwe chete inonzi Bob. Pandaiva nemakore anenge 9, baba vedu, avo vaisafarira unyengeri hwezvitendero, vakapiwa mabhuku aifumura zvitendero zvenhema. Zvavakaverenga vakazvifarira chaizvo. Pashure pemakore mashoma, Robert Atkinson akatishanyira uye akatiridzira imwe yehurukuro dzaHama Rutherford pagiramufomu. Takaona kuti vanhu vakabudisa hurukuro yacho ndivo vakabudisawo mabhuku akapiwa baba. Vabereki vangu vakati Hama Atkinson vauye kuzodya nesu manheru ega ega, vachipindura mibvunzo yeBhaibheri yakawanda yataiva nayo. Takakokwa kuti tipinde misangano pamba peimwe hama yaigara makiromita mashoma kubva pataigara. Hatina kumboverengera, uye pakabva patangwa ungano diki muHemsworth. Pasina nguva, takanga tava kugamuchira varanda vematunhu (vava kuzivikanwa sevatariri vematunhu) uye kukoka mapiyona aigara pedyo kuti azodya nesu. Kuwadzana navo kwakandibatsira zvikuru.
Takanga tava kutanga kuita zvebhizinesi, asi Baba vakati kune hanzvadzi yangu, “Kana uchida kuenda kunopayona, tichatengesa bhizinesi redu.” Bob akabvuma uye akaenda kunopayona aine makore 21. Pashure pemakore maviri, ndava nemakore 16, ndakagadzwa kuva piyona wenguva dzose. Mamwe mazuva asiri epakupera kwevhiki ndainyanya kuparidzira ndega, ndichishandisa kadhi rekupupura uye giramufomu. Asi Jehovha akandikomborera nekundipa mudzidzi weBhaibheri uyo akazosvika pakubhabhatidzwa. Vakawanda vemumhuri yemudzidzi iyeye vakazogamuchirawo chokwadi. Gore rakatevera, ndakagadzwa kuva piyona chaiye pamwe chete naMary Henshall. Takatumirwa kundima yaisava neungano kunharaunda yeCheshire.
Iye zvino pakanga pava pakati peHondo Yenyika II, uye vakadzi vainzi vabatsire pazvinhu zvine chekuita nehondo. Sevashumiri venguva yakazara, isu mapiyona chaiwo taitarisira kuti tichasiyiwawo sezvaingoitwa vamwe vaiita zvechitendero. Asi matare akaramba, saka ndakatongerwa kugara mujeri kwemazuva 31. Gore rakatevera, ndava nemakore 19, ndakanyoresa kuti ndibvumirwe kusaita basa rechiuto pamusana pehana. Ndakaendeswa kumatare maviri aiona nezvenyaya dzakadai, asi zvakangonzi hapana nyaya. Pane zvese izvi, ndaiziva kuti ndaibatsirwa nemweya mutsvene uye kuti Jehovha ainge akabata ruoko rwangu, achinditsigisa nekundisimbisa.​—Isa. 41:10, 13.
MUMWE MUNHU WEKUSHANDA NAYE
Ini naArthur Matthews takaonana muna 1946. Achangobva kuita mwedzi mitatu ari mujeri nemhaka yekuramba kupinda muchiuto pamusana pehana, akabatana nemunin’ina wake Dennis, uyo aiva piyona chaiye muHemsworth. Vakadzidziswa nezvaJehovha vachiri vadiki chaizvo nevabereki vavo uye vakabhabhatidzwa vaine makore 17 ne16. Pasina nguva, Dennis akanzi aende kuIreland, uye Arthur akasara asina wekushanda naye. Pavakaona kuti Arthur aiva piyona wechidiki aishanda nesimba uye aiva neunhu hwakanaka, vabereki vangu vakaita kuti auye kuzogara navo pamba. Pandaishanyira vabereki vangu, ini naArthur taizvipira kusuka ndiro kana vanhu vapedza kudya. Takazotanga kunyorerana tsamba. Muna 1948, Arthur akatongerwazve kugara mujeri kwemwedzi mitatu. Takachata muna January 1949, tiine chinangwa chekuzoramba tiri mubasa renguva yakazara. Tichikomborerwa naJehovha uye kunyatsoronga zvinhu, panguva yezororo taiita basa rekutanha michero kuti tiwane mari, saka takakwanisa kuramba tichipayona.
MuHemsworth tichangobva kuchata muna 1949
Tangoita nguva inopfuura gore, takanzi tiende kuNorthern Ireland. Takatanga nekuenda kuArmagh ndokuzoenda kuNewry, uye mataundi iwayo ainge akazara vanhu vechechi yeRoma. Zvinhu zvakanga zvisina kugadzikana munharaunda yacho, saka taifanira kungwarira chaizvo pataitaura nevanhu. Misangano yaiitirwa pamba pemumwe murume nemudzimai vaiva Zvapupu, vaigara makiromita 16 kubva kwataigara. Misangano yacho yaipindwa nevanhu vanenge 8. Dzimwe nguva tairara ikoko. Tairara pasi uye zuva raitevera taizopiwa zvekudya zvemangwanani zvakawanda. Zvinofadza chaizvo kuti munharaunda yacho mava neZvapupu zvakawanda.
Hanzvadzi yangu nemudzimai wayo Lottie, vainge vachitoshumira semapiyona chaiwo muNorthern Ireland, uye muna 1952 tese tiri 4 takapinda gungano reruwa muBelfast. Imwe hama yakatipa pekugara tese, pamwe chete naPryce Hughes, uyo aiva muranda webazi muBritain panguva iyoyo. Rimwe zuva ari manheru, takakurukura nezvekabhuku kainge kabudiswa kainzi God’s Way Is Love, kakanyanya kunyorerwa vanhu vemuIreland. Hama Hughes vakataura nezvekuoma kwazvainge zvakaita kutaura nevanhu vaipinda chechi yeRoma muIrish Republic. Hama dzaidzingwa mudzimba uye mapristi aikurudzira vanhu kuti vadzirwise. Pryce akati: “Tiri kutsvaga Zvapupu zvakaroorana zvine mota kuti zviite mushandirapamwe unokosha wekuparadzira kabhuku aka munyika yese.” * Ndipo patakabva tangoti, “Tichaita kudaro!”
Ndiine mamwe mapiyona pamudhudhudhu
MuDublin, mapiyona aiwanzogara kumba kweimwe hanzvadzi yainge yava nemakore yakatendeka yaishevedzwa kunzi Ma Rutland. Pashure pekunge tambomira ipapo uye pashure pekunge tatengesa zvimwe zvinhu zvataiva nazvo, tese tiri 4 takakwira pamudhudhudhu waBob ndokuenda kunotsvaga mota. Takawana mota yainyatsoita uye takakumbira muridzi wayo kuti aiunze kwataigara sezvo pakati pedu paisava neaigona kudhiraivha. Arthur akaita nguva yakawanda manheru iwayo akagara pamubhedha achiedzesera kuchinja magiya emota. Ava mangwanani, paakanga achiedza kubudisa mota mugaraji, mumishinari ainzi Mildred Willett (uyo akazochata naJohn Barr) akabva asvika. Aigona kudhiraivha. Pashure pekunge atidzidzisa kudhiraivha, takanga tava kukwanisa kuenda.
Mota yedu nekaravhani
Iye zvino, takanga tava kuda pekugara. Takanga tayambirwa kuti tisarara mukaravhani nekuti vanhu vaipikisa vaigona kuipisa, saka takatsvaga imba yekugara asi takaishaya. Manheru iwayo tese tiri 4 takarara mumota. Zuva rakatevera, takangokwanisa kuwana kakaravhani kadiki kaiva netwumibhedha twuviri twakaturikidzana. Karavhani iyoyo ndiyo yakabva yava imba yedu. Chinoshamisa ndechekuti hatina kumbosangana nedambudziko pataipaka karavhani yedu pamayadhi evarimi vaiva neushamwari. Takaparidzira ndima yaiva kure nemakiromita anenge 16 kusvika ku24. Pataienda kune imwe nzvimbo, taizodzoka tichiparidzira vanhu vemunharaunda matainge tambopaka karavhani yedu.
Takashanyira dzimba dzese dzaiva kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweIrish Republic pasina dambudziko, tikaparadzira tumabhuku tunopfuura 20 000 uye takaendesa mazita evanhu vaifarira chokwadi kuhofisi yebazi yeBritain. Chikomborero chaicho kuti iye zvino kwava nemazana eZvapupu ikoko.
KUDZOKA KUENGLAND, UYE KUZOENDA KUSCOTLAND
Nekufamba kwenguva, takanzi tiende kumaodzanyemba kweLondon. Mumavhiki mashomanana, Arthur akafonerwa nehofisi yebazi yeBritain ndokukumbirwa kuti atange kuita basa remudunhu mangwana acho! Pashure pekudzidziswa basa racho kwevhiki imwe chete, takaenda kudunhu redu kuScotland. Arthur akanga asina nguva yekugadzirira hurukuro dzake, asi kugara kwaaiita akagadzirira kusangana nematambudziko pakushumira Jehovha kwaindikurudzira chaizvo. Tainakidzwa chaizvo nebasa redu remudunhu. Taimbova mundima isina ungano kwemakore, asi pari zvino takava nechikomborero chekuva pakati pehama nahanzvadzi dzakawanda chaizvo.
Arthur paakakokwa kuti apinde kosi yemwedzi 10 kuChikoro cheGiriyedhi muna 1962, taifanira kuita chisarudzo chakakura. Kunyange zvazvo ndaizosara ndega, takasarudza kuti Arthur agamuchire ropafadzo iyi. Sezvo ndaizosara ndisina munhu wekushanda naye, ndakanzi ndidzokere kuHemsworth ndichinoshanda sapiyona chaiye. Arthur paakadzoka pashure pegore, takanzi tiite basa rekushanyira maruwa uye taishanda kuScotland, kuchamhembe kweEngland, uye kuNorthern Ireland.
BASA IDZVA MUIRELAND
Muna 1964, Arthur akapiwa basa idzva rekuva muranda webazi muIrish Republic. Tainakidzwa chaizvo nebasa rekushanyira maruwa, saka pakutanga ndakanetseka nekuchinja kwacho. Ndichitarisa zvakaitika kare, iye zvino ndinoonga kuti ndakava neropafadzo yekushumira paBheteri. Ndinotenda kuti kana ukabvuma basa raunopiwa kunyange usinganyatsorifariri, Jehovha achatokukomborera. Ndaigara ndichiita mabasa emuhofisi, kuisa mabhuku mumabhokisi, kubika, uye kuchenesa. Kwechinguva, taimboitawo basa rekushanyira maruwa uye taikwanisa kuonana nehama munyika yese. Mabasa aya pamwe chete nekuona vadzidzi vedu veBhaibheri vachifambira mberi, zvakaita kuti tive neushamwari hwakasimba nehama nehanzvadzi dzedu muIreland. Ichi chikomborero chakazokura!
KUCHINJA KUKURU MUNHOROONDO YEZVAPUPU MUIRELAND
Gungano renyika dzakawanda rekutanga muIreland rakaitirwa muDublin muna 1965. * Pasinei nekupikiswa zvakasimba, gungano racho rakabudirira chaizvo. Vanhu 3 948 vakapinda gungano racho uye 65 vakabhabhatidzwa. Vese vakapa pekugara kuvaenzi 3 500 vakabva kune dzimwe nyika, vakagamuchira tsamba yekutenda. Vanhu ava vakarumbidza vaenzi vacho nemhaka yekuzvibata kwavo. Uku kwaiva kuchinja kukuru kwakaitika muIreland.
Arthur achikwazisa Hama Nathan Knorr pavakasvika pagungano ra1965
Arthur achibudisa Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri muchiGaelic muna 1983
Muna 1966, Ireland yese yakabatanidzwa kuti ive pasi pehofisi yebazi yaiva muDublin. Izvi zvainge zvakasiyana chaizvo nekukamukana kwainge kwakaita vanhu nemhaka yezvematongerwo enyika nezvitendero pachitsuwa ichi. Takashamiswa chaizvo kuona vanhu vakawanda vechechi yeRoma vachigamuchira chokwadi uye vachishumira pamwe chete nevamwe vaimbopinda chechi dzakabuda muRoma.
Muna 2011, upenyu hwedu hwakachinja zvikuru pakabatanidzwa bazi reBritain nereIreland, tichibva tanzi tiende kuBheteri reLondon. Takagamuchira mashoko ekuchinja kwacho pandakanga ndava kunetseka nezveutano hwaArthur. Akabatwa chirwere chinonzi Parkinson’s disease. Musi wa20 May 2015, shamwari yangu yandakava nayo kwemakore 66 yakazorora murufu.
Mumakore mashoma apfuura, ndainzwa ndakaora mwoyo uye ndairwadziwa chaizvo. Kare Arthur ndiye aigara achinditsigira. Ndinomusuwa zvikuru. Asi paunosangana nezvakadai unowedzera kuva pedyo naJehovha. Zvinofadzawo chaizvo kuona kuti Arthur aidiwa zvikuru nevanhu. Ndakatambira tsamba kubva kushamwari dziri muIreland, muBritain kunyange kuUnited States. Handikwanisi kutsanangura kubatsirwa kwandinoitwa netsamba idzi pamwe chete nekukurudzirwa nemunin’ina waArthur, Dennis, nemudzimai wake, Mavis, uye nevana vehanzvadzi yangu, Ruth naJudy.
Rugwaro rwakandikurudzira zvikuru ndiIsaya 30:18. Runoti: “Jehovha acharamba akamirira kuti akunzwirei nyasha, naizvozvo achasimuka kuti akunzwirei ngoni. Nokuti Jehovha ndiMwari wokururamisira. Vanofara vose vaya vari kuramba vachimumirira.” Ndakaona kuti zvinonyaradza chaizvo kuziva kuti Jehovha ari kumirira nemwoyo murefu kuti agadzirise zvinhu uye kuti atipe mabasa anonakidza munyika yake itsva.
Ndichitarisa zvakaitika muupenyu hwedu, ndinoona kuti Jehovha akatungamirira uye akakomborera sei basa muIreland. Ndinoona iri ropafadzo yakakura kuva nezvishoma zvandakaitawo pabasa iri. Hapana kana mubvunzo kuti kuita zvatinoudzwa naJehovha kunounzwa makomborero.
^ ndima 12 Ona Bhuku Regore reZvapupu zvaJehovha ra1988 reChirungu, mapeji 101-102.
^ ndima 22 Ona Bhuku Regore reZvapupu zvaJehovha ra1988 reChirungu, mapeji 109-112.